User:CKoerner (WMF)/Enable Hovercards/Phase 1/so - Meta
User:CKoerner (WMF)/Enable Hovercards/Phase 1/so
This page is a translated version of the page User:CKoerner (WMF)/Enable Hovercards/Phase 1 and the translation is 100% complete.
Horfiirinta bogga cusub
Ku aqri farriintaan af kale • Please help translate to your language
Aqriska kooxda web ee Wikimedia Foundation waxay ka shaqaysiiyeen suur galinta Horfiirin bog, haldoor tijaabo loo yaqaan sida kaarar hore ee wax barashada, si loo fududeey habka galista isticmaalayaasha iyo habka ka bixidda mala awaalka ah ee isticmaalayaasha ee mashaariicda Wikipedia. Helista dhaqdhaqaaqyada bogga ee maqaal kasta ee ku xiran, taasoo u fududaynaysa aqristaha faham degdeg ah maqaallda xiriirka la leh asig.a oo aan bogga hadda ka bixin. Mashruucaan, waxaan filaynaa uruurinta doodaha laga keeni karo maalma gudahood iyo suurtagalinta hordhacaan horraanta bisha Maajo, 2017.
Fiira gaar degdeg ah fulinteeda
Galitaanka isticmaalayaasha ee aan hadda tijaabin si ka baxsan beta feature, hortusaha bogga wuxuu noqon doonaa mid dama si mala awaal ah. Isticmaalayaasha waxay ka soo kicin karaan doqyada isticmaalaha bogga.
Ka bixidda isticmaalayaasha, waxaa laga shaqaysiin doonaa mid ka soo qaad ah. Isticmaalayaasha waa ay iska xiri karaan xilliga ay doonaan iyagoo ka dooranaya dooqyada cog dhammaan horfiirin kasta.
Adeegsadayaasha aaladda qaadista, awood u heli maysid inaad shido bogga horfiirinta inta aad adeegsanayso popup. Haddii aad jeceshay inaad isku daydo meel ka baxsan bogga horfiirinta, ugu horrayn iska hubi inaad iska xirto popup off inta aadan ka dhaqaysiin bog horfiirinta.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan arrinkaas waxaad ka aqrin kartaa muujinta iyo tijaabooyinka aan adeegsanay si loo qiimeeyo, isku day ka baxsan ka shaqaysiinta meesha bogga tilmaamo beta, iyo ku reeb aragtidaada ama su'aalo bogga wadahadalka.
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=User:CKoerner_(WMF)/Enable_Hovercards/Phase_1/so&oldid=16619455"